Mpanamboatra PCB Assembly / Circuit Board tsara indrindra | Teknolojia tsara indrindra
Ny mpanamboatra PCB tsara indrindra ho an'ny FPC, Rigid-flex, MCPCB, Ceramic PCB, ary PCB fivoriambe.
Pcb tokana/roa sosona
Amin'ny alalan'ny lavaka Pcb Assembly
Fivoriamben'ny Cable & Wire Harness
Fivoriambe Switch Mechanical sy Membrane
Cable Flat Flexible (ffc)
Nanomboka tamin'ny 2006
Mpanamboatra takelaka vita pirinty ho an'ny mcpcb, pcb seramika, pcb varahina mavesatra, fr4 pcb, pcb manify fanampiny, pcb elastika ary pcb flexible mafy.
Teknolojia tsara indrindra amin'ny vokatra vita amin'ny board Circuit & PCB Assembly
Teknolojia tsara indrindrampanamboatra board circuit printy no mpamatsy vahaolana tokana an'nytsara indrindra PCB fivoriambe serivisy ao amin'ny solaitrabe vita pirinty vita pirinty, PCB metaly fototra, PCB seramika, PCB fr4, sns. Fanontaniana tongasoa!
Fantatrao ve ny atao hoe PCB etching?
Ny etching dia teknika hanesorana akora iray amin'ny alalan'ny fihetsika simika na fiatraika ara-batana. Azo zaraina ho sokajy mando sy etching maina ny teknika etching.
SMT dia ny teknolojian'ny fivoriambe ambonin'ny tany (teknolojia fanafohezana ny Surface Mounted Technology), izay teknolojia sy dingana malaza indrindra amin'ny indostrian'ny fivoriambe elektronika. Izany dia teknolojia fifandraisana amin'ny faritra izay mampiditra tsipìka na singa firaka firaka fohy (SMC / SMD, singa sinoa chip) eo amin'ny sisin'ny solaitrabe vita pirinty (Board Circuit Printed, PCB) na ambonin'ny substrate hafa. , ary welded amin'ny alalan'ny welding miverimberina na asitrika welding.
8-Layer 4OZ takelaka varahina mavesatra
Inona ny takelaka varahina matevina PCB? Ny takelaka varahina matevina dia aseho amin'ny fiandrasana, miaraka amin'ny tokonam-baravarana ara-teknika sy fahasarotana amin'ny asa, ary ny vidiny dia lafo ihany koa. Misy sosona foil varahina mifatotra amin'ny sosona ivelany FR-4. Rehefa vita ny hatevin'ny varahina dia 2oz, dia voafaritra ho toy ny takelaka PCB varahina matevina. Ny takelaka varahina matevina PCB dia manana fampisehoana fanitarana tena tsara, tsy voafetra amin'ny mari-pana fanodinana, azo ampiasaina ny teboka avo lenta rehefa mitsoka oksizenina, tsy miova ny hafanana ambany. brittle sy mafana fomba welding fanaova, ary koa ny fisorohana ny afo, niparitaka tamin'ny fitaovana tsy mirehitra, varahina matevina PCB hafa ny hateviny, ny fotoana fampiharana manokana dia tena hafa koa.
Ny sosona efatra amin'ny PCB varahina mavesatra 2 OZ dia avy amin'ny teknolojia tsara indrindra any Shina
Amin'ny fanamarinana PCB, misy sosona varahina mifatotra amin'ny fr-4 surface. Rehefa vita ny hatevin'ny varahina ≥ 2OZ, dia faritana ho takelaka varahina matevina izany. Hafa ny hateviny, hafa koa ny toerana tena azo ampiasaina.
Ny birao PCB 10 sosona dia avy amin'ny teknolojia tsara indrindra any Shina
Multi-sosona biraon'ny faritra amin'ny ankapobeny dia faritana ho 10-sosona —— 20-sosona na ambony, izay sarotra kokoa noho ny nentim-paharazana multi-sosona birao fanodinana birao, ny kalitao sy ny fahamendrehana takiana dia ambony, indrindra ampiasaina amin'ny fitaovana fifandraisana, avo. -server farany, elektronika fitsaboana, fiaramanidina, fanaraha-maso indostrialy, miaramila ary sehatra hafa.
Sarimihetsika seramika tokana misy sisiny matevina PCB
Ny biraon'ny sarimihetsika matevina, fantatra amin'ny anarana hoe hybrid circuit board, dia miforona amin'ny fanontam-pirinty amin'ny substrate amin'ny fitaovana samihafa. Ny substrate dia fitaovana seramika 96% alumina.
Sarimihetsika matevina tokana PCB seramika
Mpanamboatra matihanina any Shina amin'ny fanaovana seramika matevina.PCB sarimihetsika matevina, PCB seramika
Sarimihetsika seramika roa sosona matevina PCB
Mpanamboatra matihanina any Shina amin'ny fanaovana seramika matevina.
Mpanamboatra Pcb tsara indrindra miaraka amin'ny serivisy fivoriambe
nympanamboatra PCB tsara indrindra Mifantoka amin'ny vahaolana tokana amin'ny board circuit printy syFivoriambe PCB.
Hatramin'ny voalohany, amin'ny maha-mpanao pirinty board board miaraka amin'ny tsara indrindraFivoriambe PCB serivisy any Azia, Teknolojia tsara indrindra dia natokana ho mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny fandrosoana, zana-tsipìka vita pirinty avo lenta, toy ny takelaka varahina mavesatra, PCB ultra-manify, sosona mifangaro, TG avo, HDI, matetika (Rogers, Taconic) , birao fanaraha-maso impedance, Metal Core PCB (MCPCB) toy ny Aluminum PCB, Copper PCB, ary Ceramic PCB (conductor Copper, AgPd, Au, sns) sy ny sisa.
NYmpanamboatra board circuit printy manome tsy PCB ihany& MCPCB famokarana, fa anisan'izany ny PCB duplicating, Engineering& famolavolana dingana, fitantanana ny singa& sourcing vahaolana, PCB an-trano fivoriambe& fampidirana rafitra feno, ary teknolojia mipetaka amin'ny tany (SMT), fivorian'ny vokatra feno& fitsapana.
Teknolojia tsara indrindrampanamboatra biraon'ny faritra vita pirinty manana traikefa mihoatra ny 15 taona, mamaly foana ao anatin'ny 12 ora, miaraka amin'ny serivisy fivoriambe PCB tsara indrindra amin'ny vidiny tsara.
PCB Quality no fototry ny vokatra. Ny injeniera rehetra& sampana tena ilaina ry zalahy dia manana traikefa mihoatra ny dimy taona amin'ny indostrian'ny PCB, manaraka ny fenitra PCB default, ary koa amin'ny fangatahana manokana ny mpanjifa.
Ny ankamaroan'ny injeniera sy ny mpandraharaha dia manana traikefa mihoatra ny folo taona ao amin'ny orinasa PCB, ka afaka mamokatra manokana toy ny 20 OZ varahina mavesatra birao, 4 sosona MCPCB, sns.
Nividy milina avoakan'ny fanjakana maro izahay& fitaovana ho an'ny famokarana PCB, sy ny fanamarinana, mba hanatsarana ny kalitaon'ny boards.
Notohizanay ny fanatsarana ny MCPCB, FR4 PCB& FPC& Ceramic PCB haavon'ny famokarana mba hahazoana vokatra mahafa-po avy amin'ny mpanjifa sy ny tenantsika.
Momba ny mpanamboatra board circuit printy Best Technology
Fiantohana ny kalitaon'ny Birao Circuit Printed Custom
Best Technology custom pcb mpanamboatra, naorina tamin'ny Jona 28, 2006, dia Hong Kong voasoratra anarana orinasa izay nifantoka tamin'ny tokana vahaolana mpamatsy ny FPC, henjana-flex PCB, MCPCB, FR4 PCB, Ceramic PCB, manokana PCB toy ny Heavy Copper ( hatramin'ny 20 OZ), PCB manify fanampiny (0.10, 0.15mm), ary serivisy fivoriambe PCB.
Hatramin'ny niandohany, amin'ny maha mpivarotra birao pirinty (PCB) any Azia, ny Teknolojia tsara indrindra dia natokana ho mpiara-miasa amin'ny mpanamboatra PCB tsara indrindra amin'ny boards vita pirinty avo lenta, toy ny boards varahina mavesatra, PCB ultra-manify, mifangaro. sosona, avo TG, HDI, avo matetika (Rogers, Taconic), impedance fanaraha-maso birao, Metal Core PCB (MCPCB) toy ny Aluminum PCB, varahina PCB, ary seramika PCB (conductor Copper, AgPd, Au, sns) sy ny sisa.
Tsy ny PCB ihany no omenay& Ny famokarana MCPCB fa anisan'izany ny fanaovana duplicating PCB, Engineering& famolavolana dingana, fitantanana ny singa& sourcing vahaolana, PCB an-trano fivoriambe& fampidirana rafitra feno, teknolojia mipetaka amin'ny tany (SMT), ary fivorian'ny vokatra feno& fitsapana.
kalitao azo itokisana mba hihaona amin'ny mpanjifantsika
Tamin'ny 11 Jolay, nisy mpanjifa mahafinaritra avy any Alemaina nitsidika anay
Tamin'ny 11 Jolay, nisy mpanjifa mahafinaritra avy any Alemaina nitsidika anay androany maraina, raha ny marina dia i Peter, tale jeneraly anay sy Tiffany, mpivarotra anay vao nitsidika ny orinasany iray volana lasa izay tany Frankfurt. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nitsidika ny biraonay, orinasa FPC, SMT ny mpanjifa ary niara-nisakafo taminay. Fanampin'izay, nanome tetikasa bebe kokoa izahay anisan'izany ny PCB Ceramic.Misaotra noho ny fanohanany lehibe ary hanolo-tena izahay hanome ny mpanjifa ny vokatra sy serivisy mahafa-po kokoa.
Nisy mpanjifa iray avy any Etazonia nitsidika anay tamin'ny 25 Jolay 2019
Nisy mpanjifa iray avy any Etazonia nitsidika anay tamin’ny 25 Jolay 2019. Nitsidika ny orinasa SMT sy FPC izahay ary faly nahita ireo mpiasa efa za-draharaha tao amin’ny atrikasa mazava, vokatra fanaterana haingana miaraka amin’ny antoka kalitao.
Fomba iray avy any Aostralia no nifampiraharaha ny tetikasany tamin'ny Best Technology
Iray amin'ireo mpanjifanay mahafinaritra, nitsidika ny orinasanay tamin'ny 3 aprily 2019.Nilaza ny mpanjifa fa ny Best Technology dia ankasitrahana amin'ny maha-mpanome sanda ny vokatra tsara kalitao izay mahafeno ny fepetra takian'izy ireo.Nandinika ny fepetra takiana amin'ny PCB izay takiana amin'ny filan'izy ireo amin'izao fotoana izao izy ary nanome anay ny tombantomban'ny vokatra ilaina amin'ireo tetikasa ireo.
Mifandraisa amin'ny mpanamboatra PCB tsara indrindra
Avelao fotsiny ny mailaka na ny nomeraon-telefaoninao ao amin'ny taratasy fifandraisana mba handefasanay teny maimaim-poana ho an'ny endrika maro be!